March 2018 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Halkan ka dhageyso barnaamijka dhuuxa 15-07-1439
guuleed	 Mar 31, 2018 0
qeybta hoose waxaad kala degi kartaa barnaamijka xiisaha leh ee dhuuxa wareysiyada oo caawa lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan kala deg dhuuxa wareysiyada 31 03 2018.
Halkan ka dhageyso warka duhurnimo 14-07-1439
inshaa allaah qeybta hoose waxaannu idinkugu soo gudbin doonaa warka duhurnimo oo lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan ka dhageyso warka duhurnimo 31 03 2018.lite
Madaxweynaha Dowladda Oo is hortaagay Kulan lagu waday iney yeeshaan Golaha Baarlamaanka.
cusmaan	 Mar 31, 2018 0
Madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Farmaajo ayaa is hortaag ku sameeyey kulan lagu waday saaka iney yeeshaan xubnaha golaha baarlamaanka ee dowladda. Farmaajo ayaa amar ku siiyay taliyaasha ugu sarreeya ee ciidamada iney is…
Madaxweynaha dowladda Maraykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday isagoo khudbad ka hor jeedinaya boqollaal ruux in mar dhow ciidamadiisu kasoo bixi doonaan dalka Suuriya oo dhowr sano ay ku suganyihiin. Trump ayaa sheegay in hadafka…
Halkan ka dhageyso warka subaxnimo 14-07-1439
inshaa allaah qeybta hoose waxaannu idinkugu soo gudbinaynaa warka subaxnimo oo lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan kala deg warka subaxnimo 31 03 2018.lite
Inkabadan KUN Ruux oo Filastiiniyiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday Banaan baxyo ka dhacay…
Ciidamada maamulka Yahuuda ee xooga ku heysta dhulka Filastiin ayaa maalintii shalay waxay geysteen gumaad foolxumo badan oo ay kula kaceen muslimiinta Filastiin kuwaas oo dhigayay banaanbaxyo ay ku muujinayaan iney iyagu leeyihiin…
Dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 13-07-1439
cusmaan	 Mar 30, 2018 0
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka waa barnaamij todobaadle ah, oo lagu soo gudbiyo arimaha caalamka Islaamka, iyo saaxaatka uu halganku ka socodo. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 30-03-2018 Halkan ka…
cusmaan	 Mar 30, 2018 1
Diiradda Jimcaha waa barnaamij todobaadle ah oo lagu falanqeeyo mowduuc muhim ah, waxaana jimcahan lagu soo diyaariyay gobolka Hiiraan. Halkan Ka Degso Diiradda Jimcaha 30-03-2018
Halkan ka dhageyso dhuuxa wareysiyada 13-07-1439
guuleed	 Mar 29, 2018 0
Barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo ah barnaamij mug weyn oo lagu soo qaato falanqeyn iyo wareysiyo waxaa caawa ku baxay qodobo kala duwan ee kala deg linkiga hoose. Halkan kala deg dhuuxa Wareysiyada 29 03 2018.
Korneel katirsan milliteriga Dowladda Oo Muqdisho Lagu dilay.
cusmaan	 Mar 29, 2018 0
Rag bastoolado ku hubeysan oo katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa magaalada Muqdisho waxay ku toogteen sarkaal sare oo katirsan ciidamada milliteriga dowladda federaalka. Sarkaalka la toogtay waxaa lagu magacaabaa Jarane,…